November 2017 - RastraKhabar-Nepal's Popular Digital Newspaper
November 30, 2017 rastrakhabar 0
काठमाडौं : लोकप्रिय गायक तथा संगीतकार सुरेन्द्र श्रेष्ठको स्वरमा रहेको यो प्यारो बर्दियाको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यस गीतमा शब्द सावित्रि गौतमको रहेको छ ।
बर्दियामा नै गएर छायांकन गरिएको यस गीतको भिडियोमा त्यहाँको रमणीय दृश्यहरु देख्न सकिन्छ । अमृत सुनुवारको छायांकन र निर्देशन रहेको भिडियोलाई माधव बेल्वासेले सम्पादन गरेका हुन । गायक श्रेष्ठले नै भिडियोमा अभिनय गरेका छन् । गीतको भाव अनुसार भिडियो निर्माण गरिएको छ ।
Tagged Surendra shrestha
सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्रालयले बिहीबार हजरत मुहम्मदको जन्मदिनको अवसरमा सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
गृहमन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् समेत शुक्रबार सार्वजनिक बिदा भएको जानकारी गराएको छ। ‘हजरत मुहम्मद सल्ललल्लाहो अलैहे बेसल्लमको जन्म दिन को शुभअवसरमा २०७४ साल मंसिर १५ गते तदनुसार डिसेम्बर १, २०१७ शुक्रबार नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय एवम् विदेशस्थित नेपाली नियोग समेतमा सार्वजनिक बिदा दिने भनि निर्णय भएको सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित प्रशारित गरिएको छ,’ गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले इसाई धर्मावलम्बीको पर्व ‘क्रिसमस डे’ पौष १० मा समेत सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी गृहमन्त्रालयले गराएको छ।
साथै शनिबार सरकारी कार्यालय बन्द हुने र आईतवार धान्य पूर्णिमा र गैडु पूजा र उँधौली पर्व रहेको र सरकारी बिदा रहेको हुँदा अब लगातार शुक्रबार, शनिबार, र आईतवार यही मंसिर १५,१६,१७ गते सरकारी कार्यालय बन्द रहने छ्न ।
November 29, 2017 November 29, 2017 rastrakhabar 0
Tagged ArtistNepal Studios Kuber Tamang Nava Dhungel Nava Dhungel - Director Sarala Thapa
मध्य तराइकै पहिलो रेडियो, रेडियो वीरगंज ९९ मेघाहर्जको १५ औं बार्षिक उत्सवको अवसरमा आज रेडियो परिसरमा अहिले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले उदघाटन गर्नु भएको हो ।
इश्वर यादवले रक्तदान गरि शुरुवात भएको कार्यक्रममा ४२ जना महिला सहित ३ सय २९ जनाले रक्तदान गरिसक्नु भएको छ । कार्यक्रममा रेखा साह, इन्दु सर्राफ, रेणु यादव, सिमा खड्का,प्रियंका साह गोढ, बब्लु अन्सारी, दुर्गा काफ्ले, युवराज गौतम, रितेश गिरी, अनिल ठाकुर, अजय केशरी, सनिल साह, विकास राउत, ओम मिश्रा, सुजित साह, शिवशंकर मिश्रा, धिरज कुमरा गुप्ता, नविन कुमार सिंह, , तबरेज आलम, अहमद हुसेन, सचिन सुव्वा,सगिर अहमद, सैमुदिन अन्सारी, जितेन्द्र राम, अनिल महत्तो, सुवास मगर आले, कृष्ण साह, सागर खड्का, दिपु साह, प्रमोद पटेल, रमेश पण्डितसन्दिप श्रेष्ठ, मुकेश सर्राफ, श्याम साह लगायतकाले रक्तदान गरेका छन् । यस्तै कार्यक्रममा सखुवाप्रसौनी गाउपालिकाका प्रमुख प्रदीप जयसवाल, जिराभवानीगाउपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष राजहरण प्रसाद चौधरी, लगायतकाले रक्तदान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल तरुण दल बाराका अध्यक्ष लुकेश सिंहको नेतृत्वमा एक टोली नै आएर रक्तदान गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र ब्लड डोनर्स एसोसिएशनको प्राविधिक सहयोगमामा कार्यक्रममा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंह, अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारा्यणी विरगंजका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक सुर्य उपाध्याय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरिक्षक डा गणेश रेग्मी, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक शान्ति कुमार कार्की, प्रहरी नायब उपरिक्षक प्रकाश सापकोटा, रक्तसंचार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख प्रवीण मानन्धर, ब्लड डोनर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष शत्रुघन नेपाल, वीरगंज युवा समाजका अध्यक्ष कमल चौगाई, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, लगायतको उपस्थिथि रहेको थियो ।
कार्यक्रममा ३ जना द्धृष्टिविहीन किशोरहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । यसैविच रक्तदान कार्यक्रममा तरुण दल वाराका अध्यक्ष लुकेश सिंहको नेतृत्वमा बाराबाट मोटर साईकल र्याली सहित आएको टोलीले रक्तदान गरेका थिए । यस्तै रक्तदान कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरुले समेत रक्तदान गरेका थिए ।
तेस्रो लिंगीको भूमिकामा अनु शाह
November 29, 2017 rastrakhabar 0
काठमाडौं । डेढ दर्जन बढी फिल्ममा नायिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी चर्चित अभिनेत्री अनु शाहले तेस्रो लिंगीको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । गायक तुलसी सिवाकोटीको भर्खरै सार्वजनिक भएको ‘म त मान्छे सिधा साधा’ बोलको आधुनिक गीतमा अनुले तेस्रो लिंगीको भूमिका निर्वाह गरेकी हुन् ।
सुर्य खत्रीको शब्द रहेको रोमान्टिक शैलीको उक्त गीतमा अनु शाहको साथमा गायक शिवाकोटीले नै अभिनय गरेका छन् । लिला सिवाकोटीको संगीत र निरज श्रेष्ठको एरेन्ज रहेको गीतको म्यूजिक भिडियो रोमान्टिक शैलीमा निर्माण भएको छ ।
उत्सव दाहालद्वारा छायांकन गरिएको उक्त भिडियोका सम्पादक निशान घिमिरे हुन् । गीतको म्यूजिक भिडियोलाई हाइलाइट्स नेपालको यूट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
यूरोपका नेपालीहरु माझ लोकप्रिय रहेका गायक शिवाकोटीको यो गीत सार्वजनिक भएसँगै नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा उनको क्रेज बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।
बस दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु
काठमाडौंबाट अर्घाखाँचीतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस चितवनको फिस्लिङमा दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । लु २ ख २९१ नम्बरको बस बिहान ९ः१५ बजे त्रिशूलीमा नदीमा खसेको हो । मृतक कसैको पनि सनाखत हुन सकेको छैन ।
बसबाट हालसम्म १५ जना घाइतेको उद्धार गरिएको छ । बसमा कति यात्रु थिए भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
दुर्घटनास्थलमा खटिएका नेपाल प्रहरीका डीएसपी शिव शर्मा आचार्यले ६ जनाको हालसम्म शव फेला परेको जानकारी दिए । दुर्घटना लगत्तै नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय उद्धारमा जुटेका छन् ।
November 28, 2017 November 28, 2017 rastrakhabar 0
विवाहित महिलाहरूको व्यक्तित्व विकास, प्रतिभा प्रस्तुति र उनीहरूलाई घरबाट बाहिर ल्याएर नेतृत्वमा अघि बढाउन अमाजोन ईन्टरटेन्मेन्टले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्दै आइरहेको ‘मिसेस क्यापिटल क्वीन नेपाल २०१७’ को तेश्रो संस्करणको प्रतिस्प्रधीहरुको फोटोसुट सम्पन्न भएको छ। कमलादी स्थित आर्टिस्ट नेपालको स्टुडियोमा सम्पन्न फोटोसुटमा जीवनमा पहिलो पटक गरेको मोडेलङ बेस फोटोसुटमा प्रतिस्प्रधीहरुले नयाँ अनुभब भएको बताए । ग्ल्यामर फोटोग्राफर कुबेर तामाङले बिबाहित नारीहरुमा लुकेको प्रतिभा फोटोसुटमा आफुले अनुभभ गरेको बताए। फोटोसुटमा शर्मिला कोईराला तथा उहाको टिमले मेकअपमा साथ दिएका थिए ।
मंसिर २६ गते फिनाले हुने यस् प्रतिस्पर्धाको लागि आएका प्रतिष्पर्धीलाई व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकास, प्रभावकारी वत्तृत्वकला, मानवधिकार, र्याम्पम फोटोसुट लगायात विभिन्न शिषर्कमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको कोरियोग्राफर हिमानी सुब्बाले बताईन। विवाहित महिलाहरुमा केन्द्रित बौद्धिकता,सौन्दर्य, आन्तरिक प्रतिभा र सांस्कृतिक सचेतनाका साथ साथै प्रतियोगीहरुको प्रतिभा निखार्दै पेसा र समाजप्रति थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको यस् प्रतियोगितामा बिबाहित महिलाहरुको उत्साहजनक सहभागिता भएको आयोजक संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक कमल खतिवडाले बताए ।
थुप्रै ब्युटी प्याजेन्ट तथा र्‍याम्प शोको कोरियोग्राफी गरिसकेकी हिमानी सुब्बा तुम्बाहाम्फेले आफ्नो जन्मदिन सि वब्लु रेस्टुरेन्टमा सेलिब्रेट गरिन । उनको जन्मदिनको अवसरमा अमेजन इन्टरटेनमेन्टका ईभेन्ट म्यानेजर कमल खतिवडाले उनलाई सरप्राइज दिन बोलाउदैं केक काट्न लगाए । आफ्नो जन्मदिन आफ्ना प्रसंसक र शुभेच्छुकहरुले आयोजना गरिदिएपछि हिमानी पनि निकै हौसिइन् ।
सन्२०११मै मिस परीको उपाधि जितेर मोडलको रुपमा रूपमा सक्रिय हुँदै सफल एबं ब्यबसायिक कोरियोग्राफरका रुपमा स्थापित भईसकेकी हिमानीले बर्थडेपार्टीमा आफ्नो उमेर भने सार्बजनीक गरिनन।थुप्रै ब्युटी प्याजेन्टका बिजेताहरु सहभागी भएको उनको बर्थडे सेलिब्रेसनमा मिसेस क्यापिटल क्वीन नेपालको तेर्श्रो सिजन र मिस एन्ड मिसेस धादिङको तयारी गर्दै गरेको पनि बताईन।
अमेजन इन्टरटेनमेन्टमार्फत आयोजना हुने दुबै प्रतियोगिताको ईभेन्ट म्यानेजमेन्ट कमल खतिवडाले गरिरहेकाछन भने कोरियोग्राफी हिमानीले गरिरहेकी छिन्।
वर्षमा डेड दर्जनभन्दा बढि सौन्दर्य प्रतियोगिताको कोरियोग्राफी गरिरहेकी तथा देउरालीको दुई थुंगा फूलसहित आधादर्जन नाटकमा अभिनय गरिसकेकी हिमानीलाई हाम्रो पनि जन्मदिनको शुभ–कामना।
November 22, 2017 November 28, 2017 rastrakhabar 0
नेपाली साँगितिक क्षेत्रको चिरपरिचित अनुहार जसले लोकदोहोरी क्षेत्रमा आफ्नो नृत्य मार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै आईरहेकी छिन् । नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि चर्चा कमाउन सफल नृत्याङ्गना एंव मोडल जसले १००० वटा भन्दा बढि म्युजिक भिडियोमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरिसकेकी छन् । नेपाली रियालिटि सो छमछमी बाट नृत्यको यात्र सुरु गरेकी उनलाई त्यस यता पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । दोहोरी गीतको म्युजिक भिडियोमा हेर्नेहरुले उनलाई नचिन्ने विरलै होलान् । बहुप्रतिभावान, कर्मठ एंव दोहोरी गीतको नृत्यको क्षेत्रमा उनी दर्शकहरुको पहिलो रोजाईमा पर्दै आएकी छिन् । अत्यन्तै व्यस्त एंव उच्च पारिश्रमिक लिने उनै सफल मोडल ,कलाकार पार्वती राईसंग राष्ट्रखवरलेगरेको कुराकानीको मूख्य अंस ।
तपाई अत्यन्तै व्यस्त कलाकार हाल के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म अहिले अमेरिकामा छु । नेपालबाट फग अवार्ड कार्यक्रमका लागि अमेरिका आएकी हुँ । अमेरिका आए लगतै थुप्रै सांस्कृतिक कार्यक्रममा निमन्त्रणा आएपछी यतैतिर व्यस्त भएकी छु । मैले क्यालिफोर्निया,वाल्टिमोर ,लसएन्जल्स, जर्जीया लयातका ठाउँहरुमा प्रस्तुति दिईसकेकी छु भने अन्य ठाउँहरुबाट पनि निमन्त्रणा आएको छ । केही समयको अमेरिका बसाईपछी म नेपाल फर्कन्छु ।
विशेष गरेर लोकदोहोरी क्षेत्रमा अभिनय गर्ने नेपाली कलाकारहरुलाई अमेरिका जान सहज छैन भन्ने सुनिन्छ के भन्नुहुन्छ ?
अमेरिका आउनका लागि आफ्नो प्रोफाईल र डकुमेन्ट अमेरिकन राजदुतावासले भने अनुरुप हुनुपर्छ । मैले नेपालमा धेरै काम गरिसकेको र यताको स्पोन्सहरुको सपोर्टको कारण पनि म यता आउन पाएकि हुँ । म यस भन्दा अघि पनि अमेरिका आईसकेकी थिए यो मेरो दोस्रो अमेरिका बसाई हो । दर्शकहरुको अपार मायाले नै मेरो बसाई केहि लम्बिएको हो ।अहिले अमेरिकी राजदुताबासले मल्टिपल भिषा दिएको छ । पाँच बर्ष अमेरिका आवतजावत गर्नलाई भिजाको समस्या छैन ।
नेपालमा दोहोरी गीतका मोडल कलाकारले पारिश्रमीक पाउँदैनन् विदेश नगए उनिहरुको गुजारा चल्ने अवस्था छैन भन्ने सुनिन्छ ?तपाई नेपालमा पनि व्यस्त नै हुनुहुन्थ्यो विदेश किन जानुभएको ?
नेपालमा पनि विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम र म्युजीक भिडियोकै कारण व्यस्त भएकै बेलामा केही फुर्सद निकाले विदेशबाट आएको निम्तो स्विकार्न र एवार्ड कार्यक्रममा सहभागी हुन यहाँ आएकि हुँ । अहिले नेपालमा पनि राम्रै पारिश्रमिक पाईरहेकी छु । व्यस्तताका बावजुत पनि विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाई दिदि बहिनीको निम्तो स्विकार्न आएकी हुं । त्यसैले कार्यक्रममा सहभागी भईरहदा नेपाली दर्शक संगै रमाईलो गर्दै दिन वितेको पत्तो नै पाएकी छैन ।
तपाईले विदेशी कार्यक्रममा कत्तिको सहजता महसुस गर्नुभएको छ , बसाई कस्तो छ ? कलाकारलाई विदेशमा कुन रुपबाट हेरिदो रहेछ ?
नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनी संग कार्यक्रममा सहभागी हुँदा विदेशमा आएको छु भन्ने भान नै हुँदैन । सबैले माया गर्नुहुन्छ । अझ विशेष गरेर भुटनिज कम्युनिटिहरुले हामीलाई अत्यन्तै माया दिनुभएको छ । यहाँको व्यवस्थापन र नेपाली संगैको बसाईले काम संगै रमाईलो र उत्साह पनि थपीएको छ ।
अब कहिले नेपाल फर्कदै हुुनुहुन्छ ?
अब अंग्रेजी नयाँ बर्षमा तय गरिएका कार्यक्रम सकेर नयाँ बर्षपछी नेपाल फर्कदैछु । नेपालमा फर्किए लगतै थुप्रै म्युजीक भिडियोका अफर आएका छन् । बाकी रहेका कामहरु पुरा गर्नुछ । अभिनयलाई नै निरन्तरता दिनेछु ।